Ciidamada Asluub Soomaaliyeed ayaa maanta u dabaal dagayo 48-sano guuradii ka soo wareegatay Aasaaskooda, iyadoo munaasabado loogu dabaal dagayo maanta ay ka dhacayaan magaalada Muqdisho. Munaasabadaan ayaa waxaa ka soo qeyb galaya masuuliyiin kala duwan oo ka socota Dowlada fedraalka Soomaaliyeed, wasiiro, xildhibaano, taliyaal iyo xubna kale oo qeyb ka noqon doono. Taliyaha...
Wararka laga helaayo Degmada Baardheere ee Gobolka Gedo ayaa sheegaay in degmadaas ay ku dagaalameen Ciidamo Itoobiyaan ah iyo Al-shabaab oo weerar ku soo qaaday saldhig ciidamada Itoobiya ay ku leeyihiin afaafka hore ee garoonka diyaaradaha ee Degmada baardheere ee Gobolkaas Gedo. Dagaalkan ayaa waxaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, iyadoona dhawaqa...
Xubno ka socota Qaramada Midoobay, ayaa maanta gaaray Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug. Xubnahaan ayaa u badnay Saraakiil qaabilsan oo dhanka ammaanka waxaa socdaalka ay ku gaareen Dhuusamareeb uu ku qotomaa sidii ay ugu aragtiya dhiiban lahaayeen shir maalmihii lasoo dhaafay ka socday Magaalada Dhuusamareeb kaas oo looga hadlayay amaanka, sidii dagaalamayaasha...
War ka soo baxay Wasaarada Dastuurka Maamulka Koofur-Galbeed ayaa lagu sheegay in xariirkii ay la haayeen wasaarada Dastuurka Soomaaliya ay u jareen, sidaasi waxaa lagu yiri warqad kasoo baxday xafiiska wasiirka dastuurka Koofur-Galbeed Cabdullahi Shiiq Xasan. Wasiirka wasaarada Dastuurka Maamulka Koofur-Galbeed Cabdullahi Shiiq Xasan ayaa sheegay in la dafiraad weyn...
Maxkamada Ciidamada Qalabka Sida ee Soomaaliya ayaa goordhow waxa ay xukun ku riday Sarkaalkii ka dambeeyay dilkii Taliye ku xigeenkii ciidanka Badda Soomaaliya Allaha u Naxariistee General Siciid Aadan Dheere (Siciid Mariine) Bishii January ee sanadkaan ayaa Taliye ku xigeenkii ciidanka Badda Soomaaliya Allaha u Naxariistee General Siciid Aadan Dheere (Siciid Mariine)...
Waxaa Golaha wasiirada ee xukuumada Somalia shir ay yeesheen lagu Magacaabay Taliyaasha ciidmada Booliska , Nabad-Sugida iyo Asluubta ee Somalia kadib Reysulwasaare Kheyre oo shir gudoomiyay. Wasiiru dowlaha Xafiiska Reysulwasaraha ee xukuumada Cabdullahi Xaamud Maxamed oo warbaahinta la hadlay kadib kulanka Golaha wasiirada ayaa sheegay in Taliyajha ciidanka booliska...
Ugu yaraan 100 ruux ayaa lagu soo waramayaa in ay ku dhaawacmeen kaddib rabshado ka dhacay Daanta Galbeed ee Gaza. Ciidamada Yuhuudda ayaa furay rasaas, sida ay soo wariyeen kooxaha caafimaadka kaddib markii banaan baxayaal ay buux dhaafiyeen Daanta Galbeed Khamiistii. Dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday go’aan aad uga careysiiyay dunida Islaamka waxaana dalal...
Mogadishu (Somaliafocus) – Dowladda Soomaaliya ayaa ku biirtay Dowladaha Muslimiinta ah ee Canbaareeyay Go’aankii Madaxweynaha Maraykanka ee magaalada Barakeysan ee Qudus ugu aqoonsaday Caasimadda Yahuudda ee Israel. Bayaanka ka soo baxay Dowladda Soomaaliya ayaa u qornaa Sidaan. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxa ay si dhow ula socotay, iyada oo ka walaacsan...
Ammaan (Somaliafocus) – Boqolaal qof ayaa isugu soo baxay afaafka hore xarunta safaaradda Mareykanka ee Amman, iyaga oo codsanaya in albaabada loo laabo dhammaan saldhigyada Mareykanka uu ku leeyahay Jordan. Dadka isugu soo baxay halkaasi ayaa ah kuwo ka careysan mowqofka Mareykanka ee ah in Jerusalem ay noqoto caasimadda Yuhuudda xilli beesha caalamka ay...
Paris (Somaliafocus) – Weeraryahanka Kooxda Real Madrid Ronaldo ayaa markiisii 5aad ku guuleystay abaalmarinta Ballon d’Or ee la gudoonsiiyo laacibka ugu wanaagsan dunida, waxaana uu ka guuleystay Messi oo ay xifaaltamaan. Guushan ayaa ka dhigan in uu bareejeeyay laacibka Barcelona Messi oo sidoo kale abaalmarintan helay shan jeer. Waa sanadkii labaad oo si...